ညီနေမင်း: အင်တာနက် တစ်ကယ်မြန်တဲ့ Net speeder 4.5
အင်တာနက် တစ်ကယ်မြန်တဲ့ Net speeder 4.5
အင်တာနက် speed မြှင့်ပေးတဲ့ program ပါ . မြန်မမြန် ကတော့ ကိုယ့်ဟာကို စမ်းကြည့်လိုက်ပါ . သိသိသာသာမြန်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်. အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်က သူတွေအတွက်ပါ . နောက်ဆုံးထွက် version ကို တင်ပေးထားပါတယ် . speed သိသိသာသာ တက်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ . အဆင်ပြေရင် အော်ခဲ့ကြဖို့လဲ မမေ့ပါနဲ့ . ကျွန်တော့်မှာလဲ software တိုင်းလိုလိုကို download လုပ်ပြီးတာနဲ့ ကိုသုံးသုံးမသုံးသုံး install လုပ်ပြီး စမ်းပြီးမှ ဖိုင်ကို တင်ပေးတာပါ . အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာမှာတော့ software တွေက တင်လိုက်၊ ဖျက်လိုက်၊ ပြန်တင်လိုက်၊ ပြန်ဖျက်လိုက်၊ ဖိုင်ပြန်စီလိုက်နဲ့ အလုပ်ကို ရှုပ်နေတာပဲ . ဒါကလဲ ကိုကတော့ တင်ပေးလိုက်ပြီး သုံးတဲ့သူတွေကျတော့ အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ စမ်းပြီးမှ တင်ပေးလိုက်တာပါ . အသေးစိတ် ဘာရေးထားလဲသိချင်ရင် မူရင်းဆိုက်မှာ သွားဖတ်လိုက်ပါ .
သူ့ရဲ့ မူရင်းဆိုက်က ဒီမှာ ပါ ..
အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .
Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download multiupload
Download လုပ်၊ ပြီးတာနဲ့ ဖိုင်ကိုဖြေချလိုက်ပါ
Install လုပ်လိုက်ပါ .
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ Register လုပ်ရပါတော့မယ် .
Register လုပ်ဖို့အတွက် About >> Register ကို ရွေးလိုက်ပါ . (ပုံ-၁)
Name, Email, Registra မှာ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ ဖိုင်ထဲက အတိုင်းဖြည့်လိုက်ပါ .(ပုံ-၂)
Register ကို နှိပ်လိုက်ပါ (ပုံ-၂)
Register လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ . နောက်ထပ် လုပ်ရမှာက ကိုသုံးတဲ့ connection ကိုရွေးပေးရမှာပါ .
အပေါ်ဆုံးက Tweak wizard ကို ရွေးလိုက်ပါ .
ပေါ်လာတဲ့ box က Next ကို နှိပ်ပါ .
အဲ့မှာ ကိုသုံးတဲ့ connection ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ . ကျွန်တော်ကတော့ Wireless connection ကိုရွေးပေးထားပါတယ် .
ပြီးရင် Next ကို ဆက်နှိပ်ပါ . အဲ့မှာ ဘာမှမပြင်ပါနဲ့ Next ကိုပဲ ဆက်နှိပ်ပါ .
Finish ကို နှိပ်ပါ . Box တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် . Yes ပေးလိုက်ပါ . (ပုံ-၆)
အားလုံး ပြီးတာနဲ့ restart ပေးလိုက်ပါ . ကဲ မြန်လားမမြန်လား စမ်းကြည့်လိုက်ပါ . အောက်မှာ ပုံတွေတင်ပေးထားပါတယ် .
Posted by ညီနေမင်း at 11:57 PM
Labels: Internet faster softwares
myo September 28, 2009 at 12:09 PM
ညီလေး လုပ်ကြည့်တာ Name နဲ့ E-mail မှာအကို ထည့်ထားတဲ့အတိုင်း ထည့်ပြီး Registra နေရာမှာလည်းအဲအတိုင်း စတားတွေ ထည့်တာမရဘူး အကို။ မြန်မာနှိင်ငံမှာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီမှာလည်း တခါတလေ လိုင်းမကောင်းလို့ လုပ်ရတာပါ။အဲဒါတွေဖြည့်ပြီး Registra လုပ်လိုက်တာ Need Speeder ဆိုတဲ့ Box လေးပေါ်လာပြီး Static ဆိုတာလေးဘဲပြတယ်။အဲဒါလုပ်မရလို့ အကိုအားရင် တချက်လောက် ပြန်ချက်ပေးပါဗျာ.........
ဃဗအဦဆဗဂဢဦဈဗဂဢဦ September 29, 2009 at 12:29 AM
ဟုတ်တယ်ဗျ နာမည်နဲ့ မေးလ်မှာ တော့ အိုကေပါတယ်
Registra မှာအဆင်မပြေဘူး ကူညီပါဦး အဲအဆင့်ကနေကို မတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေလို့ ပါဗျာ
မောင်မိုး September 29, 2009 at 2:49 AM
မောင်မိုး October 1, 2009 at 7:27 PM
ကိုညီရေ..အင်စတောလုပ်လို့တော့ရပြီ။ ကျွန်တော်က Edge Modem , package 1-2 call ကိုသုံးတာဗျ.. အင်စတောလုပ်တုန်းက ကော်နက်ရှင်တိုက် မှာ ၀ိုင်ယာလက် လို့ပေးခဲ့တယ်။ အခု စပိက မတက်လာဘူးဗျ...အရင်ထက်တောင် ပိုကျသွားသလိုပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ..။ ပြန်ဖြုတ်ရမလား။ ကော်နက်ရှင်တိုက် ပြန်ပြောင်းရမလား။
Zarmani November 2, 2009 at 2:58 AM
အစ်ကိုရေ လုပ်ကြည့်တာကောင်းပါတယ်။ အကုန်အဆင်ပြေပါတယ်။ attach တွဲတာ အရမ်းမြန်သွားတယ်။ ကျန်တာတွေလဲ အရင်ကထက်ပိုမြန်လာတယ်။ ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော် window xp ပေါ်မှာတင်ပြီးသုံးတာပါ။
သူ့ကို တင်တုန်းက window xp နဲ့ vista အတွက် လို့ ပါတယ်။ အဲဒီ net speeder ကို window7မှာ တင်လိုက်တာ attach တွဲတာကော ကျန်တယ့်အပိုင်းအားလုံးမှာပါ အရင် ပုံစံအတိုင်းပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ net speeder က window7မှာ သက်ရောက်မှုမရှိသလိုပဲ။ window7မှာလဲ မြန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပါလားအစ်ကို။
soe November 17, 2009 at 11:25 PM
၀မ်းမိုး December 7, 2009 at 8:32 PM
အစ်ကိုကျွန်တော့်စက်ကမနေ့ကမှ window ပြန်တင်တာပါ.window ကအသစ်ဆိုတော့စိမ်းနေတယ်
internet connection ကလည်းသိသိသာသာကိုကျနေတယ်။ ပြီးတော့ အစ်ကိုနမူနာပြတဲ့ပုံတွေမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ် လုပ်ပါဦး
Firefox browser ကို နှစ်ဆပိုမြန်အောင် ဘယ်လို speed...
Torrent file တွေကို ဘယ်လို Download လုပ်မလဲ
kav7 , 8 and 9
Nokia phone တွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Nokia pc s...
Virus ကြောင့် ပျောက်နေတဲ့ Tools တွေကို ဘယ်လို ပြန်...
မိမိ gmail account ကို ဖျက်ပစ်ချင်သလား .
Zaw gyi ကို vista မှာ တင်တာ အဆင်ပြေစေဖို့ .
အင်တာနက် web page တွေ ဖွင့်ရင် မြန်စေဖို့ FullSpee...
Raxco PerfectDisk 10 နဲ့ ကွန်ပျူတာ မြန်အောင် ဖိုင်...
Flash Drive ကို ဘယ်လို နာမည်မျိုးပေးသင့်သလဲ .
.js နဲ့ eot ကို ဘယ်နေရာမှာ စိတ်ချလက်ချ တင်လို့ရနို...
computer model number ကို ဘယ်လိုကြည့်မလဲ
Virus ကြောင့် ရှိနေတဲ့ File တွေက Hidden File တွေဖြ...
Asus F5n notebook drivers download for Windows Vis...
ASUS F5N (Driver CD) For XP
Aspire M1641 M3641 M5641 Windows Vista Drivers :
Aspire M1641 M3641 M5641 Windows XP Drivers
Portable WeBuilder 10.0
Portable Adobe pagemaker 7.0
kaspersky 2009 ကို ဘယ်လို activated key ဖြင့် သက်တ...
Portable VSO Image Resizer 1.3.4.4
Portable Active Desktop Calendar 7.45
Portable Face Smoother 1.35
Portable Google Earth 4.3.7191
Portable Auslogics Disk Defrag 1.4.16.308
Portable Auslogics Registry Defrag 4.1.11.105
minn minn: သုံးလို့မရတော့ဘူး ကိုနေမင်း DeskSoft D...
HDD ရဲ့ bad sector ကို ဘယ်လို Fixed ပြန်လုပ်မလဲ .
Portable Nature Illusion Studio 2.80
Portable ImTOO ISO Burner 1.0.31
Portable save2pc 3.41 Pro
Bluetooth နဲ့ အင်တာနက် ဘယ်လိုချိတ်မလဲ .
အဖြူရောင်သံစဉ် Radio ကို Ning ဆိုက်မှာ ဘယ်လိုထည့်မ...
Cyberlink PowerDirector Ultra 8.00.1930
kaspersky 2010 ကို ဘယ်လို install လုပ်မလဲ
window vista recovery Disk
norton 2010 beta
kaspersky ရဲ့ version အကုန်လုံးအတွက် တင်ထားပေးတာပါ...
Folder Lock 6.2.5 with serials (portable)
Your Uninstaller! Pro (Portable)
DVDFab Platinum 6.0
Rapidshare မှာ Download အတွက် 15မိနစ် စောင့်စရာမလု...
J2ee ebooks များ (English)
KIS 2010 New Keys + KIS 2009 New Keys
mail ကို အခုမပို့ဘဲ နောက်မှ ဘယ်လို ပို့မလဲ နှင့် O...
CD Burner (Portable)
Win Rar (portable)
Nero 8.3.6.0 (Portable)
audio အတွက် စိတ်မပျက်နဲ့ .
Adobe reader (portable)
Corel Draw X3+ SP2 (Portable)
photoshop 7.0 portable
Visual Basic6Portable
Live CD နဲ့ CD ပေါ်က window ကို Run ပြီး သုံးကြည့်ရ...
Ram ကို 512+1G စိုက်လို့ရပါသလား
window server 2003 (မြန်မာလို)
window မတင်တတ်သူများအတွက် (မြန်မာလို)
Advanced Digital Photography (မြန်မာလို)
Adobe Photoshop CS (မြန်မာလို)
Internet Download Manager (IDM) 5.18
Kaspersky internet security 2010 Keys
KIS 2009 New Keys
audio လား video လား
အိုင်တီခရီးသည်: ကိုညီရေ.. တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ....
Local area connection မပေါ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Printer မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စာရွက်ရေ ကုန်ဆုံးသွားရင်...
Adminstrator account နဲ့ ပြန်ဝင်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်...
isa server စာအုပ်များ
Epson အတွက် SSC service program
PC ကို USB flash drive နဲ့ သောခတ်ကြည့်ရအောင်
window myanmar translator (82.9 MB)